Ka codso Hada UNDP Job oo ku taal Abuja si aad uga hesho Kaaliyaha Barnaamijka 2021: Warka Dugsiga ee Hadda
Hada Ka Codso Shaqada UNDP ee Abuja 2021: Ma shaqo baad ka dooneysaa Nigeria 2021? Ma jeceshahay inaad ka shaqeyso UNDP? Sidoo kale, dhib malahan hadii aan kugu hagno sidaad u codsan karto shaqaalaynta UNDP ee Nigeria iyo wixii ka baxsan? Hadday haa tahay, ka dib sii wad akhriska.
Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay (UNDP) waxay ka caawisaa dalalka soo koraya inay soo jiitaan oo u adeegsadaan gargaarka si wax ku ool ah. Dhamaan howlaheena, waxaan ku dhiiri galineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha, kobcinta awooda iyo awood siinta haweenka.
UNDP waxay qoreysaa inay buuxiso booska hoose:
Ayuub: Ciwaan: Kaaliyaha Barnaamijka - Iskaashiga Nigeria ee Xoojinta Jawaab celinta Caddaaladda Dambiyada ee Argagixisanimada (iyadoo la raacayo mashruuca caalamiga ah "Xoojinta Nidaamka Sharciga ee Argagixisada"): GLOR35
Aqoonsiga Shaqada: 4234
Aag Tababar - Qoys Shaqo: Dhisidda Nabadda
Nooca Banaan: Qandaraaska Adeegga (SC)
Nooca dhajinta: Dibedda
Muddada qandaraaska: Muddada bilowga ah ee hal sano
Mawqifkani wuxuu ku yaalaa Xafiiska Qaramada Midoobay ee Mukhaadaraadka iyo Dambiyada (UNODC) Xafiiska Dalka ee Abuja, Nigeria (CONIG).
Wada shaqeynta koox ka socota shaqaalaha kale ee mashruuca taageera ee ku jira CONIG, masuulka ayaa mas'uul ka noqon doona bixinta mashruuca, hawlgal, abaabul, saad iyo maamul.
Tani waxay ku lug yeelan doontaa qorsheynta iyo fulinta hawlo kala duwan oo hawl, saad iyo maamul u leh howlaha mashruuca; abaabulka safarka shaqaalaha mashruuca, khubarada iyo kaqeybgalayaasha; diyaarinta qiyaasaha kharashka iyo dayactirka qiyaasaha kharashka; soo saarista iyo baahinta dukumintiyada waqtiga ku habboon; taageerida waxqabadka goobta; diyaarinta iyo bixinta taageerada xoghaynta guud, iwm.
Sidii loogu baahdo, asaga / asaga wuxuu kaloo bixin doonaa taageero soo iibsiga iyo taakuleynta miisaaniyada iyo maamulka maaliyadeed ee mashruuca.
Mas'uulka hadda shaqeynaya wuxuu ku shaqeyn doonaa kormeerka tooska ah ee sarkaalka (yada) mashruuca loo xilsaaray iyo hagida Isuduwaha Mashruuca iyo hagida guud ee Wakiilka UNODC iyo Madaxa Barnaamijka.
Heerka boostada waa SB3 / 2 (oo u dhiganta G5).
Waajibaadka iyo Mas'uuliyadaha
Xilka ayaa qaban doona howlaha soo socda:
Bixiyaan taageero hawl, abaabul, saad iyo maamul ee mashruuca;
La shaqee Isuduwaha Mashruuca, saraakiisha kale ee mashruuca iyo hoggaamiyaha Kaaliyaha Barnaamijka si loo hubiyo in taageerada maamul iyo urur looga baahan yahay la siiyo hawlo kala duwan, oo badanaa isku mar ah.
Ka caawi kormeeraha (yada) iyo saraakiisha kale ee mashruuca loo xilsaaray inay gutaan waajibaadkooda mashruuca iyagoo fulinaya howlo kala duwan oo taageero ah.
Aqoonsiga iyo fulinta qabanqaabinta ururinta, saadka iyo maamulka loo baahan yahay ee kooxaha loo qoondeeyay ee howlaha mashruuca, sida siminaaro, aqoon isweydaarsiyo iyo shirar.
Tani waxay ku xirnaan doontaa: go'aaminta shuruudaha adeegga iyo abaabulka soo iibintooda, abaabulka safarka iyo hoyga shaqaalaha mashruuca, khubarada iyo ka-qaybgalayaasha; diyaarinta iyo baahinta waqtiga dukumiintiyada; taageerida waxqabadka goobta, iwm.
In taageero laga siiyo barta UNODC ee ah ilaalinta amniga shaqaalaha UNODC.
La talin oo samee qabanqaabada rarka iyo helitaanka xafiiska iyo saadka mashruuca iyo qalabka iyo saamaynta reerka; oo ay kamid tahay nadiifinta kastamka.
Bixiyaan talo bixin iyo caawimaad xubnaha shaqaalaha iyo kuwa ku tiirsan iyaga oo ka baaraandegaya codsiyada fiisooyinka, kaararka aqoonsiga, liisamada wadista iyo dukumiintiyada kale ee lagama maarmaanka u ah shaqaalaha si waafaqsan shuruudaha Qaramada Midoobay iyo waddanka ay ku taal goobta shaqada.
U samee waajibaadka kale sida loogu baahan yahay, sida waraaqaha guud, ka qaybgalka shirarka iyo diyaarinta daqiiqadaha shirarka, iwm.
Bixinta taageerada soo iibsiga iyo miisaaniyadda iyo maareynta maaliyadeed ee mashruuca: si dhow ula shaqee kaaliyaha miisaaniyadda iyo maaliyadda ee mashruuca, taageerida shaqada aagga sida loogu baahan yahay
Si dhow ula shaqee Associate Program Associate oo u adeeg sidii kayd ahaan sidii loogu baahdo
Diyaarso qiyaasaha kharashka iyo dayactirka qiyaasaha kharashka iyo dulmarrada howlaha mashruuca.
Caawinta xiriirka tooska ah iyo isgaarsiinta iyo dabagalka xiriirka lala yeelanayo hay'adaha iyo mas'uuliyiinta dowladda, wakiillada maxalliga ah ee ururada kale ee Qaramada Midoobay, NGO-yada, ururada bulshada rayidka ah, dadka kheyraadka leh iyo warbaahinta ee ku saabsan waajibaadka UNODC iyo arrimaha mashruuca.
Joogtee xiriirinta iyo isku dubaridka ka dhex jira CONIG iyo Laanta Ka Hortagga Argagixisada iyo Qaybta Gobolka ee Afrika iyo Bariga Dhexe; la xiriir UNDP iyo ururada kale ee qaramada midoobay laxiriira arimaha maamulka ee kuxiran hirgalinta mashruuca.
Aruurinta, uruurinta iyo dayactirka feylasha macluumaadka laxiriira howlaha mashruuca, soona saar wax soo saar warbixinada mashruuca iyo shabakadaha macluumaadka laxiriira lana ilaaliyo liistada hay'adaha iyo khubarada; ilaali diiwaanno faahfaahsan oo ku saabsan waxqabadka mashruuca, oo ay ku jiraan ajandayaasha, liiska ka qaybgalayaasha, faahfaahinta xiriirka khubarada iyo warbixinnadooda.
Caawinta maareynta hantida saxda ah, kormeerka, duubista iyo qashinka, diyaarinta warbixinada Risiitka iyo Kormeerka (R & I) si loogu gudbiyo unugyada wax soo iibsiga ee khuseeya iyo howlaha kormeerka.
Caawinta iyo diyaarinta barnaamijyada iyo saadka ee khabiirada booqashada, ergooyinka, wufuudda iyo wakiillada deeq-bixiyeyaasha.
Uqabso hawlo kale sidii laguu igmaday.
Khibrad u leh maamulka mashruuca iyo abaabulkiisa oo ay ku jiraan aqoon hufan iyo fahamka fikradaha iyo habab la xiriira miisaaniyadda iyo maareynta maaliyadda; aqoonta shuruucda maaliyadeed iyo xeerarka ee Qaramada Midoobay iyo sidoo kale la socoshada siyaasadaha iyo habraaca Qaramada Midoobay maadaama ay la xiriiraan miisaaniyadda barnaamijka iyo maamulka maaliyadda; muujiyey karti xirfadeed iyo hanashada howlaha maamulka; karti u leh qabashada howlo kala duwan oo xagga maamulka ah, oo ay ku jiraan qorshaynta dhacdooyinka iyo abaabulka iyo maamulka shaqaalaha; karti u lahaanshaha khariidadaha khataraha ka imaan kara iyo sameynta waxyaalo lama filaan ah, sida loo baahdo.
Waxay muujisaa ku faanidda shaqada iyo guulaha; waa mid damiir leh oo hufan la kulanka ballanqaadyada, u kuurgalida waqtiyada loo qabtay iyo gaaritaanka natiijooyinka; waxaa dhiirrigeliya xirfadle halkii ay ka walwalin lahaayeen shaqsiyadeed; waxay muujineysaa adkeysi markay wajahayaan dhibaatooyin ama caqabado adag; iyo ballanqaad muuqda oo ku aaddan qiyamka Qaramada Midoobay, gaar ahaan daacadnimada hawl maalmeedka iyo dabeecadaha.
Maxaad ka qaadaneysaa Codsiga Hada UNDP Job ee Abuja ee Kaaliyaha Barnaamijka 2021? Waxaan idinka codsanayaa inaad isla tan isticmaashaan fursad si aan ula wadaagno macluumaadkan kuwa kale adoo adeegsanaya Facebook, Twitter, or Google+. badhanka wadaag qeybta hoose.
Ka codso Hada Shaqooyinka La-talinta ee UNDP, Abuja - 2016
Xariirka Shaqada ee Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay 2021 www.unicef.org
Xariirka Shaqaalaynta Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay 2021 www.undp.org
Qorista Codsiga Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay 2021/2022
Shaqada UNICEF ee Kaaliyaha Maamulka ee 2021 Codso Hada
UNICEF Shaqada Sarkaalka Caafimaadka 2021 Codso Online-ka Hada
Qorista UNICEF ee Khabiirada Caafimaadka ee Abuja, Nigeria 2021
Tags: Shaqooyinka Abuja, Hada Codso Shaqada UNDP, Hada Codso UNDP Job 2021, Hada Ka Codso Shaqada UNDP ee Abuja, Hada Ka Codso Shaqada UNDP ee Abuja 2021, Ka codso Hada Shaqada UNDP ee Abuja si aad uga hesho Kaaliyaha Barnaamijka, Hada Ka Codso Shaqada UNDP ee Abuja Kaaliyaha Barnaamijka ee 2021, Hada Codso Shaqooyinka UNDP, Hada Codso Shaqooyinka UNDP 2021, UNDP
« Xariirka Shaqaalaha BLW www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa
Musharax Fenix ​​International Shortlisted Musharax 2021/2022 PDF List Download »